Zvitsuwa zvakanakisa zvePortugal | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Islands, Putugaro
Pasina mubvunzo Putugaro Iyo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa zhizha kune avo vanogara munzvimbo dzinotonhora dzeEurope. Asi pamusoro pekunaka kwayo kwekondinendi uye nemahombekombe ayo ekudenga, nyika ine zviwi zvakaisvonaka, zvinoshamisa rimwe nerimwe nenzira yaro.
Chinhu chakanaka pamusoro pezvitsuwa zvePortugal ndezvekuti mamiriro ekunze anotonhora gore rese, saka unogona kuronga kushanya kune zvaunofarira. Nhasi, saka, zvitsuwa zvakanaka kwazvo zvePortuguese, iwo ausingakwanise kupotsa muzhizha rako.
Portugal ine mashoma ezvitsuwa ayo ari madiki eparadhiso uko kunze kunodziya gore rese. Nhasi tiri kuzotaura nezve Sao Miguel Island, Cape Verde, Armona Island, Madeira, Flores, Terceira, Pico, Porto Santo, Da Tavira Island uye Faial Island.
La Sao Miguel chitsuwa Icho chitsuwa chikuru kuongorora uye kuyemura. Icho chikamu cheboka re Azores zviwi uye ndiro rakakura kwazvo muboka iri. Iine akawanda volcanic calderas uye chaizvo nekuda kwayakatangira kune akawanda matsime anopisa. Pane dzimwe nguva dzegore, mukuwedzera, kubva kumahombekombe iwe unogona kuona marwenga nema dolphin uye iwe unogona kunyange kuita kushanya kuti unzwisise mhuka idzi zvakanyanya. Unogona kusvika nendege, pane nhandare, uye nguva yakanakisa yekuenda iri pakati paApril naNovember.
Chitsuwa chakanaka chekuzorora ndicho chakakurumbira Cabo Verde, kunyange iri muMozambique. Icho boka renyeredzi re zvitsuwa zvinoputika, gumi zvachose, nemamiriro ekunze ese akaenzana. Ndokunge mamiriro ekunze akaoma, hazviwanzo hainyanyi kupisa kana kutonhora zvakanyanya. Iyo panguva imwecheteyo tsika yekuenda, nekuda kwenzvimbo yayo yeAfrica.
Iyo inzvimbo huru yevashanyi, inozivikanwa. Guta rayo guru ndiPraia, inova iyo mahotera, maresitorendi uye mamwe akaunganidzwa. Nguva yakanakisa yekushanya ndeye kubva munaNovember kusvika Chikumi.
La Ilha De Armona Iyo ndeyenzvimbo yeAlgarve uye inzvimbo iri kure kure nenzvimbo yevashanyi. Iri padyo nemhenderekedzo hapana mota, vashoma vanhu uye unofema kutonhora kwekudziya. Chitsuwa ichi chine mahombekombe paAtlantic uye chimwe paRwizi rweFormosa. Kana paine mhepo yakadzika, ivo vakasununguka uye vanoyevedza madziva echisikigo. Kune matunduru ane maruva, mvura inoonekera uye akawanda mabhawa uye maresitorendi ari padyo nejeti uko chikepe chinodonhedza iwe.
Ngarava inongotora maminetsi makumi maviri. Inosiya Olhao uye chikepe basa rinoenderera, gore rese, kunyangwe kazhinji mumwedzi yezhizha, Chikunguru naAugust. Pamativi ese ari maviri echikepe kune Ría de Armona pamhenderekedzo, neBlue Flag. IAtlantic pamhenderekedzo iri kune rimwe divi rechitsuwa, rwendo rweinopfuura kiromita chete iwe kwaunogona kuona dzimba dzinoyevedza dzevabati vehove. Iwe zvakare uchaona iwo musasa wechitsuwa uye iyo agency yekushanya panoshanyirwa mafaro.
Kuti usvike pamhenderekedzo unoyambuka nzira yemapuranga iyo inobhururuka pamusoro pe yero yeruzevha, yakazara nemazwi. Kune zambuko kumadokero iro rinokuendesa iwe kuchikamu chechitsuwa uko mafungu anomuka achidonha uye iwe ukaona kuuya nekuenda kwezvikepe. Gungwa rekupedzisira rakakura uye nerombo rakanaka pane bhawa repamahombekombe rinoroja mahammoketi, maamburera uye rinotengesa chikafu nezvinwiwa.
Madeira ndechimwe chezvitsuwa zvine mukurumbira muPortugal, kuNorth Atlantic. Mamirioni evashanyi anoishanyira gore rega uye zvakare ine yakanakisa mamiriro ekunze. Kwete chete ine beaches, kana zvisiri masango akasvibira iyo inokoka kuongorora uye zviitiko zvakaita se kutasva bhiza, kayaking, gorofu, paragliding, hove ...
Chitsuwa iri makiromita mazana matanhatu kumahombekombe ekumadokero kweMorocco uye zvakanyanya kana zvishoma daro rakaenzana kubva kumahombekombe ePortugal. Chenjera, Madeira hachisi chitsuwa chimwe chete, asi chitsuwa chine zviwi zvina zvinoumba chizere. Iyo yechiPutukezi vhezheni yeHawaii, ine mahombekombe, makomo anoputika, madziva, nemasango.
La Pico Island iri muAzores uye inozivikanwa ne volcano wezita rimwe chete. Pfuma yayo uye inonyanya kufarirwa nzvimbo yevashanyi ndiyo Ponta do Pico, gomo refu-soro munyika. Ehe, kukwira kumusoro ndiko kusingarasikirwe nemunhu. Asi pamusoro peiyo Pico chitsuwa chakasvibira kwazvo, chinonaka kuongorora ... uye kuravira. Uye iye ndiye Pico anogadzira waini, waizviziva? Iyo minda yemizambiringa zvechokwadi iri PNzvimbo Yemagariro Enyika ye kukosha kwetsika kwehupfumi hwePortugal.
Iwe unosvika kuPico mumaawa matanhatu neigwa kana ndege. Kuenda kubva kuLisbon ndiyo pfungwa yakanakisa asi iwe unogona zvakare kutanga kubva kuHorta. Pakati pezvitsuwa zvePortugal zvatiri kuongorora, hatigone kukanganwa Flores, chitsuwa chine fotogenic yezvose. Zviri mukati meAzores chikuva, mukati meboka rekumadokero, uye nguva yakanakisa yekuishanyira iri kubva pakati paApril kusvika pakati paGumiguru. Flores Island yakaziviswa yakachengetedzwa yeiyo Biosphere naUNESCO in 2009.
Iyo yakanaka kwazvo zvekuti zvakaoma kuwana pekugara mumwedzi yezhizha saka usaendeko uye rega rombo rako rione. Chirongwa! Iwe uchada chiwi: iwe unogona kufamba, uchiona ayo akanaka mapopoma, kukwira, kushambira, whale kutarisa, kayaking ...
La Ilha da Tavira ari paAtlantic uye zvakanaka rwendo rwezuva. Iyo ine inonakidza mamiriro ekunze uye pamazuva anodziya yakazara vanhu. Inofanira kutaurwa kuti ine mashoma mazana emamita egungwa. Pachitsuwa super yakagadzirirwa kushanya saka kune maresitorendi, mabhawa, maresitorendi nemakambani ekushanya anoronga zuva nemabasa aro. Iko, sekureva kwezita, muTavira, uye inosvika nechikepe, maferi uye matekisi emvura.
Tavira Yakareba makiromita gumi nerimwe chete asi ayo mahombekombe ane jecha uye nemvura yavo yebhuruu havazokusiyi. Pamusoro pezvo kune shiri dzakawanda uye madziva uye ipapo, akanaka pink flamingo. Iko kuratidzwa! Chimwe chitsuwa chakanaka ndicho Terceira Island, chitsuwa chechitatu pakukura muAzores, kunyange isiri iyo yakanyanya kukura. Asi hei, runako rwayo rwuri chaizvo mune ino inenge mhandara nyika uye mukugamuchira vaeni kwevanhu vayo.
MuTerceira kuchine iyo Castelo de San Juan Bautista, nhare yakamborwisa maSpanish, uyezve hapana anogona kubva pano asina kuravira iyo waini yakasvibirira, hunyanzvi hwemuno. Zviri nani kuenda kubva Chivabvu kusvika Gumiguru. Asi kana iwe uchitsvaga mahombekombe saka iko kuenda ndiko Porto Santo Island, kuchamhembe kweMadeira. Pasina kupokana apa pane mamwe e mahombekombe akanakisa muPortugal, ane jecha jena jena uye mvura ye-turquoise.
Asi Porto Santo zvakare ine nhoroondo, iyo Christopher Columbus imbasemuenzaniso, chechi yezana ramakore regumi nesere, zvivakwa zvezana ramakore rechi XNUMX… Chinhu chakanaka nezvePorto Santo ndechekuti inogona kushanyirwawo gore rese. Chitsuwa chidiki, asi chakanakisa. 100% mahombekombe, kudhiraivha uye snorkeling. Isu tiri kuswedera padhuze nekuguma kwenyaya. Faial chitsuwa iri Blue Island, iri pakati peAzores ne machena mahombekombe, guta reHorta nemakomo anoputika.
Kuongorora iyo Caldeira kuita Faial Ndicho fanira mushanyi. Izvo zvakafanana edza chikafu chemuno. Kuenda rini? Pakati paMay naGumiguru.
Sezvauri kuona, mwedzi wega wega wegore kune chitsuwa chePortugal chekushanyira, zvese zvinoenderana nerudzii rwemaitiro epasirese auri kutsvaga asi zviri pachena, muhuwandu hwegungwa, zuva uye jecha zvine inshuwarisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » Putugaro » Zvitsuwa zvakanakisa kwazvo zvePortugal